‘एकीकरण सार्थक बनाउन वाम उम्मेदवारको जीत जरुरी’ : राम कार्की | अन्तरवार्ता | साझामन्च
प्रकाशित मिति : २०७४ ,मंसिर , १८ 07:13:18
मेडिकल कलेज र इन्जीनियरिङ कलेज खोल्छौँ ।। बन्द भएका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।। जित्ने आधार वामपन्थीको मत नै हो ।। नयाँ समाजवादको रणनीति बनाउन चाहन्छु ।। प्रतियोगितामा सँधै म प्रथम भएको छु ।।
वामपन्थी प्रगतिशील राष्ट्रवादी गठबन्धनको तर्फबाट झापा क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्नु भएका राम कार्की ‘पार्थ’ वौद्धिक नेता एवम् वाम गठबन्धनको सूत्राधारको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । चुनावी सन्दर्भमा उहाँसँग पत्रकार झुलन रेग्मीले अन्तरवार्ता लिनुभएको छ ।
वौद्धिक नेताको रुपमा तपाइँ चिनिनु भएको छ । राजनीतिक यात्रा बारे केही जानकारी गराइदिनु होस् न ।
वि. सं. २०२८ सालमा म्याट्रिकको परीक्षा दिएपछि मेरो राजनीतिक यात्रा शुरु भएको हो । त्यतिखेर म एउटा प्रतिभाशाली विद्यार्थीको रुपमा गनिन्थे । जिल्लामा भएको साहित्यिक प्रतियोगितामा सधैँ म नै प्रथम हुन्थे र पुरस्कार पाउँथे । त्यसपछि स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको नजर म माथि पर्यो । शुरुमा म बीपी कोइरालाबाट प्रभावित थिएँ । २०३२ सालमा मेलमिलापको कार्यक्रम आएपछि म उहाँहरुबाट असन्तुष्ट भएँ । रामराजा प्रसाद सिंहले गणतन्त्रको वकालत गरिरहनु भएको थियो । चे ग्वाभारालाई आफ्नो आदर्श मान्नु हुन्थ्यो । मैले पनि त्यो अवस्थामा चे ग्वाभाराको फाटफुट रुपमा अध्ययन गरिसकेको थिएँ । म त्यसबाट निक्कै प्रभावित भएको थिएँ । माक्र्सवाद र लेनिनवादको सिद्धान्तलाई मैले अवलम्बन गरे ।
पारिवारिक पृष्ठभूमि बारे केही बताइदिनोस् न ?
आर्थिक रुपमा हुनेखाने भनेर गनिएको परिवारमा नै जन्मिएको हुँ । मेरो हजुरबुबा लप्टन हुनुहुन्थ्यो । म ७ वर्षको हुँदा मेरो बुबा खस्नुभयो । त्यसकारण सम्पत्तिको खासै सदुपयोग हुन सकेन । बाल्यकाल कठिनाई मै बित्यो । तर राजनीतिक यात्रा मेरो निरन्तर नै रह्यो । मैले एक्लो महसुस कहिलै गरिन । राम्रो पढेलेखेको महिलासँग मेरो विवाह भयो । मेरो घरको व्यवहार उनले सम्हालिन् । आर्थिक रुपमा पनि सबल भएका कारण कसैसँग झुक्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएन ।
तपाईंलाई वाम गठबन्धनको सूत्राधार र समाजवादको व्याख्याता मानिन्छ । नेपालमा कस्तो समाजवाद उपयुक्त हुन्छ ?
कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एजेन्डाहरु स्थापित गर्न मैले योगदान दिएको छु । अहिले संविधानमा जुन समाजवाद उल्लेख गरिएको छ । त्यो समाजवाद परिभाषित भएको छैन । कस्तो समाजवाद भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । संसारमा विभिन्न ढाँचाका समाजवादहरु छन् । त्यसमा वीपी कोइरालाहरुले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद । अर्काेतर्फ लेनिन र माओहरुले विकसित गरेको समाजवाद । मेरो रायमा नेपालका निम्ति विश्वमा भएका समाजवादहरुको प्रयोग गरी त्यसलाई नयाँरुपमा हामीले नेपालमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ । वेलायतको आन्दोलन के भयो ? अमेरिकामा समाजवादी आन्दोलन के भो ? युरोप वा अरु देशहरुमा समाजवादी आन्दोलन के भो ? त्यो हेरिँदैन । जसरी सोभियत संघ ढल्यो । त्यसरी नै वेलायतका लेबर पार्टीका नेताहरुले पनि जीवनको अन्तिममा लेखेका छन् कि श्रमिकहरुका लागि गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यो हुन सकेन ।
चुनावबाट नयाँ प्रयोग गर्छाै कामदारका लागि पनि सजिलो व्यवस्था ल्याउँछौ भन्ने सोचका साथ त्यसमा हामी असफल भयौँ भन्ने कुरा उनीहरुको जीवनी पढेर सुनेको छु । त्यसो हुनाले नेपालका निम्ति समाजवाद नै मौलिक चरित्र बोकेको नेपालको विशेषता सुहाउँदो र इतिहासमा समाजवादका प्रयोगहरु भए, त्यसका सफलता र असफलताको शिक्षाबाट नेपालमा समाजवाद लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ । समाजवाद कस्तो हुन्छ, के हुन्छ ? भन्ने रणनीति बनाउनका निम्ति स्वाभाविक रुपमा म योगदान दिन चाहन्छु ।
मतदाताले तपाईंलाई किन रोज्ने ?
२०÷३० वर्ष नेपाललाई राजनीतिक एजेण्डाबाट अगाडि बढाउने र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वतन्त्र स्वभिमानी, आत्मनिर्भर, सम्पन्न र समृद्ध तथा विविधतायुक्त भएको नेपाल बनाउनु पर्नेछ । यी एजेन्डा हामीसँग भएकाले र यी एजेन्डाका आधार र म आफू पनि समाजवादका निम्ति लडिरहेको व्यक्ति भएको हुनाले त्यसले पनि मलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने नै हो ।
जित्ने आधार त एउटा वामपन्थी मत नै हो । अर्काे कुरो मेरो राजनीतिक जीवनले पनि त्यसलाई मद्दत गर्छ । किनभने मेरो जीवनमा म मन्त्री पनि भएँ । सांसद पनि भएँ । तर पनि मैले आफ्नो जुन कम्युनिष्ट आचरण हो त्यसलाई मैले पालना गरिरहेँ । यी कारणले गर्दा मलाई लाग्छ जनताले मलाई रोज्नु हुन्छ ।
चुनाव जितेपछि तपाईंका योजना के–के छन् ?
एउटा त समग्र नेपालकै विकास गर्नुछ । त्यसमा पनि मेरोे योगदान रहनेछ । हामी नेपालमा कस्तो खाले शिक्षा नीति अवलम्बन गर्ने, कस्तो प्रकारको भूमि व्यवस्थापन गर्ने, नेपालले विकासको कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा प्रस्ट छौँ । एउटा दीर्घकालीन विकास रणनीति जुन अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसमा म योगदान गर्छु । त्यसैले समग्र नेपालको विकासका नीति बनाउँछौँ । मजदुर किसान श्रमिक वर्गलाई ध्यान दिएर नीति बनाउँछौँ । त्यसैले नीति बनाउँदा श्रमिकहरुको ज्यालामा अभिवृद्धि गराउँछौँ ।
अब बन्द भएका उद्योगहरुलाई खोल्ने, नेपालमा बाटो बनाउँदा त्यसले उत्पादनलाई जोडोस् र नेपालकै अर्काे ठाउँलाई लिङ्क गरोस् । यो पनि सोच राख्ने रहेको छ । अर्काे कुरा हामीले पाँच–सातवटा बाटो उत्तरतिर पनि बनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा हाम्रो छिमेकी चीनले रेलमार्ग बनाएको छ, त्यहाँसम्म हाम्रो पहुँच हुन सकोस् ।
झापाकै निम्ति भन्नु हुन्छ भने म पूर्वाञ्चलमा यहाँको प्रदेश नम्बर १ को इञ्चार्ज, त्योभन्दा पहिले मेचीको इञ्चार्ज भएर बसेको छु । त्यसले गर्दा मलाई झापाका विशेषताहरु थाहा छ । झापाका नदी वरदान पनि अभिशाप पनि हुन् । यहाँका खहरे खोलाहरु व्यवस्थित गर्नु छ । अर्को कुरा यहाँ जंगली हात्तीको समस्या छ । यसबाट जनतालाई छुटकारा दिलाउनु छ । त्यस्तै विगत केही दशकदेखि राष्ट्रिय महत्वका उद्योगहरु झापामा देखा परिरहेका छैनन् । त्यसो हुनाले झापामा उद्योगहरु स्थापना गर्नु, प्राविधिक कलेजहरु खोल्नु, मेडिकल कलेजहरु खोल्नु, इन्जीनियरिङ कलेजहरु खोल्नु छ । यी तमाम कुराहरु मेरो एजेन्डामा पर्छन् ।
तपाईं कसलाई प्रतिस्पर्धी ठान्नुहुन्छ ?
निर्वाचन हँदैछ । यो वडाको निर्वाचन होइन । यो केन्द्रको निम्ति सांसद छानिने कुरा हो । वडाको निम्ति भए, स्थानीय या अरु अरु कुरा गर्न मिल्थ्यो । नेपालको हरेक नागरिकलाई हरेक क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने अधिकार छ । विगतमा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पर्सा जस्तो मधेशमा आएर चुनाव लड्नु भयो । हाम्रा मदन भण्डारी, प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले विभिन्न क्षेत्रहरुबाट निर्वाचन लड्नु भएको इतिहास छ । यो चाहिँ राजनीतिक इस्यू नभएपछि उठाइने कुरा हुन् । यस्ता कुराहरु पञ्यायतकालमा गरिन्थ्यो । जातिको, क्षेत्रको, गोत्रको कुरा उठाइन्थ्यो । अहिले उठाउनुको कारण उहाँहरुसँग अरु राजनीतिक मुद्धा नभएर हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम रणनीतिक लक्ष्य र हिंड्ने बाटोको कुरामा कुनै मतभेद देखिँदैन । खासगरी २०६३ ÷०६४ पछि एमाले र माओवादी पार्टी एउटै निष्कर्षमा आइपुगेका छन् । उनीहरुले समाजलाई जुन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यो अध्ययनबाट एउटै प्रकारको निश्कर्ष निस्किएको छ । चाहे त्यो प्रजातन्त्रको बारेमा होस् या वर्तमान अवस्थाको बारेको होस् या त भावी रणनीतिको बारेमा नै किन नहोस् । अनि बाटोको बारेमा । कुन बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने भन्ने विषयमा पनि मतैक्य हुने भएकाले पनि पार्टी एकीकरण हुन्छ । नेपालका श्रमजीवि जनताको उत्कट चाहना पनि हो, एकीकरण होस् भन्ने नै रहेको छ ।
अबको लडाईं काँग्रेससँग मात्र हो ?
कम्युनिष्टको सरकार आए देशमा अधिनायकवाद हावी हुन्छ भन्ने विपक्षीको आरोप छ नि ?
त्यो उहाँहरुले भनेको प्रजातन्त्र चाहिँ धनीमानी, सुविधासम्पन्न सुकिला मुकिलाहरुले भोगिरहेको सुविधालाई मान्नु हुन्छ । हाम्रो भनाई के छ भने जहाँ प्रजातन्त्रको सूर्य पुगेको छैन । सुकुम्बासी, दलित, मुस्लिम समुदाय, महिलाहरुको संसारभित्र पनि प्रजातन्त्र पुग्नु पर्छ भन्ने हो । त्यसैले प्रजातन्त्रको विस्तारलाई घनिभूत पार्ने कुरा हामी गर्छौ । आफूसँग इस्यू नभएर, आफ्नो अस्तित्व बचाउनका निमित्त यस्तो अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन् ।
तपाईंको क्षेत्रमा चुनावी परिणामको अङ्क गणितीय हिसाब कसरी गर्नु भएको छ ?
चुनावी अङ्क गणित स्पस्ट नै छ । वाम गठबन्धन १७ हजारभन्दा बढी मतले अगाडि छ । यसमा राप्रपाको मत पनि थपिएको छ । त्यसैले पनि हामी हाम्रो विजयप्रति ढुक्क छौँ । अझ पार्टी एकताको घोषणाले देखिएको उत्साहको मत हामीसँग छ ।
अन्त्यमा, आम मतदाताहरुलाई के आह्वान गर्न चाहनु हुन्छ ?
मलाई पार्टीले जहाँ जिम्मेवारी दियो, त्यो काम पूरा गर्दै आएको छु । कुनैबेला मलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख त कहिले प्रदेश प्रमुख भएर काम गरेको छु । एक नम्बर प्रदेशको इञ्चार्ज हुँदा म एउटै टोलमा एउटै गाउँमा, क्षेत्रमा सीमित भएर बस्ने कुरा भएन । र, स्थानीयवादको नारा लगाएर जुन साथीहरु चुनाव लडिरहनु भएको छ । उहाँहरु पनि १ नम्बर क्षेत्रमा मात्रै बस्नु भएन । देशैभरि आएको गएको सुनिथ्यो । मैले नि बेलाबखत फोन गर्दा दाई म बाहिर जाँदैछु भन्ने कुरा सुन्थेँ । अहिले चाहिँ मलाई पार्टीले १ नम्बर क्षेत्र जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यसैले मैले राजनीतिक रुपमा प्रदेश नं. १ मा नै नेतृत्वले निर्वाह गर्ने भूमिका गर्छु । मैले विकास निर्माणलगायत अरु कुराहरुमा १ नम्बर क्षेत्रमा नै केन्द्रित हुन्छु । किनभने मेरो जिम्मेवारी यही ठाउँमा छ । त्यसैले म यहीँ नै केन्द्रित हुन्छु । म मतदाताहरुलाई यही विश्वास दिलाउँदै वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई अत्याधिक मत दिएर विजय गराउन आग्रह गर्दछु ।
(झापा क्षेत्र नं. १, प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार, नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य राम कार्की नेपाल सरकारका पूर्व सञ्चारमन्त्री पनि हुन् ।)